परमाणुको भन्दा कोरोनाको सेफ्टी किट उत्पादन आवश्यक भएको शक्ति राष्ट्र बल्ल चाल पाउदैछन् - डा. भण्डारी
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य तथा बौद्धिक नेता डा. चन्द्र भण्डारीले परमाणुको उत्पादन भन्दा कोरोनाको सेफ्टी किट उत्पादन आवश्यक भएको शक्ति राष्ट्रले बल्ल चाल पाएको बताएका छन् । मानवता नै संसारको प्रमुख धर्म भएको भन्दै उनले भने संसारमा हाल मौजुदा भएको परमाणु बमले पृथ्वीलाई कयौं पटक धवस्त पार्न सक्छ तर जोगाऊन एक पटक पनि सक्दैन भन्ने कुराको पुष्टि अस्ट्रेलिया र अमेजनको डढेलो नै गरेको थियो ।
कोरोनाले चीनको अर्थतन्त्रमा उसको जीडीपीको १.७ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ३७ अर्ब डलरसम्म घाटा पु¥याउन सक्ने एडीबीले जनाएको छ । चीनबाहेक अन्य एसियाली मुलुकले पनि कुल जीडीपीको ०.५ प्रतिशत अर्थात् ४२ अर्ब डलरसम्म घाटा पु¥याउन सक्ने एडीबीले जनाएको छ । विश्व अर्थतन्त्रमा पनि ६८ अर्ब डलरको असर पर्ने एडीबीले जनाएको छ । तर अब कुरा अर्थतन्त्रको मात्र रहेन यसले अहिलेसम्मका चिन्तन माथि प्रश्न उठाउदै हाम्रो अस्तित्वमाथि नै ठूलो प्रश्न चिन्ह खड़ा गरी दियाे।
विज्ञान र प्रविधि जस्काे विकास र विस्तारमा हामी अन्धाे भएका थियौं त्यसलाई पनि विकलाङ्ग बनाई दियाे । वैश्विकरणले सम्पूर्ण विश्वलाई एउटा गाउँमा परिणत गरेको थियोे जसकाे पुष्टि काेराेनाले पनि गर्याे । चाहेर पनि राष्ट्रिय सिमानाहरुले भाईरसलाई राेक्न सकेनन। हातहतियार र परमाणुकाे उत्पादनमा भन्दा सेफ्टि कीट आवश्यक रहेछ भन्ने शक्तिशाली राष्ट्रहरुले पनि थाहा पाए। यस घटनाले विश्वलाई नयाँ सोच तिर लैजाने छ ।
काठमाडौं प्रेसको समाचार हटाउनु प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको ठाडो हस्तक्षेप : पत्रकार महासंघ
पूर्वजनमुक्ति सेनाका कमाण्डर मित्रको दुर्घटनामा परी निधन